I-WOWOW Iglasi yeGlasi yeZiko lokuhlambela Igumbi lokuhlambela nge-4 intshi ye-Bathroom Sink Faucet ene-Drain Assembly
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Iziko lokuqubha leepompo zangasese / I-WOWOW Brushed Gold Centerset Igumbi lokuhlambela ityhubhu ye-4 intshi Igumbi lokuhlambela lokuntywila nge-Drain Assembly
4 intshi ezintathu-Hole Faka: Iza nomsele, i-cUPC eqinisekisiweyo ngemigca yamanzi ashushu nabandayo kunye neiglavu, ukupakishwa okugcweleyo, kwaye kulula ukuyifaka.
I-Retro kunye ne-Basin Faucet elula: Igolide, efudumeleyo kunye nobunewunewu, yakhela igumbi lokuhlambela elihle nelinokuhombisa. Ukugqitywa kwebrashi kunokukunceda ukumelana nokubola kunye nokugqwala kubomi bemihla ngemihla.
Kulula ukuyisebenzisa: Ukujikeleza kwe-360-degree, uyilo oluphezulu lwe-arc, kunokunyusa indawo yokucoca, kuzise lula ngakumbi kubomi bakho bemihla ngemihla. Ibhobho yokuhlambela ebamba kabini ikuvumela ukuba ulawule ngokulula ubushushu obushushu nobushushu
Umgangatho ophezulu wexabiso: Umlenze wobhedu kunye nolwakhiwo oluqinisekisa ukuzinza nokuxhomekeka; ICarrow-free disc yeCartridge. Umphunga wombhobho wokuhambisa amanzi owenziwe nge-ABS aerator unokukunceda ugcine amanzi. (Esi sihambisi-moya singathatyathwa kanye ngezandla zakho ukuze sicoceke)
SKU: 2321400G iindidi: Iziko lokuqubha leepompo zangasese, Ukuhlamba igumbi lokuhlambela tags: Igolide edityanisiweyo, Bamba kabini
12.2 x 8.58 x 3.54 intshi
ICenterset Deck Mount
Isiqinisekiso sonyaka se-5
WOWOW Matte Mnyama-mbini uphethe i-Bathroo ebanzi ...